Xarunta Sare Qaramada Midoobay sidoo kale Fadhiga Qaramada Midoobay waa dhisme aad u wayn oo ku yaala caasimada New York wadanka Maraykanka. Badhtamihii Diisambar 1945, ayaa Golaha Guurtida Maraykanka iyo Aqalka Wakiiladu u codeeyeen in Ururuka Qaramada Midoobay laga codsado ineey Xarunta Sare ka dhisato wadanka Maraykanka. Arintaasi way aqbashay Qaramada Midoobay, waxayna deegaan ka salaxatay bariga caasimada New York halkaasi oo ay ku iibsatey lacag dhan US $8.5 milyan oo ahayd lacag deeq ah. Dhismaha oo socday labo sano (1949 ilaa 1950) waxaa la furay Xarunta Sare Qaramada Midoobay Janaayo 9, 1951, inkastoo la dhamaystiray dhismaha bishii Oktoobar 9, 1952. Inkastoo xarunta ugu muhiimsan ku taalo caasimada New York, ururku wuxuu xafiisyo waaweyn ku leeyahay Jeniifa, Heeg, Fiyeena, Nayroobi iyo meelo kale oo badan.
Dumarka Qabiilka Jibeewaha ee ku dhaqan gobolada Minnesota iyo Wiskonsin wadanka Maraykanka. Dadkani waa Ameerikaanka Asalka ah ee qaarada Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika ku noolaa tobanaan kun oo sano. Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxay dadkan ku magacaabaan "Cali-beesteen".
Waqooyiga Ameerika portal